M-A-C-E shooter Game For Android ~ မိုးညိုသား
M-A-C-E shooter Game For Android
10:54 AM Android Game No comments
အာကာသထဲမှာ စစ်တိုက်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် M-A-C-E ပါ။။။ ကစားလို့လည်းကောင်းပါတယ်..
လိုချင်တဲ့သူရှိရင် ယူသွားလိုက်ပါဗျာ...ဒီဂိမ်းလေးကို ကစားနိုင်ဖို့အတွက် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းဟာ Android ဗားရှင်း 2.2 နှင့်အထက်ရှိဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပြေ ကစားနိုင်ပါစေဗျာ..
ဂိမ်းဒေါင်းရန်>>> Mediafire ၊ Zippyshare
ဂိမ်း Cache ဒေါင်းရန်>>> Mediafire ၊ Zippyshare
Installation guide:(Install လုပ်နည်း)
2. Extract the archive with the game cache (by 7z or WinRAR) and copy extracted files to your phone to the folder which is specified in the game description. If the path to the cache isn't specified in the game description ask for it at our Facebook group